‘Chineke, n’Ihi Gịnị Ka I Ji Kwere Ka nke A Mee?’
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Jenụwarị 1, 2003
GỤỌ NKE Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Moore Ossetian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu
RICARDO ka na-echeta mgbe ya na nwunye ya, bụ́ Maria, nọ ọdụ n’ọnụ ụlọ a na-anọ echere dọkịta. * Ọ dịghị onye n’ime ha obi kara ịgụ ihe dị n’akwụkwọ e dere ọrịa a chọpụtara n’ahụ́ a ka lepụrụ Maria. Mgbe ahụ, Ricardo meghere envelopu ahụ, ha lekwara anya ngwa ngwa n’okwu ndị dọkịta ji eme ihe nke dị n’akwụkwọ ahụ e dere ihe na-arịa Marịa. Ha hụrụ okwu bụ́ “cancer,” ha abụọ malitekwara ibe ákwá ebe ha ghọtara kpọmkwem ihe okwu ahụ pụtara.
“Dọkịta ahụ nwere nnọọ obiọma,” ka Ricardo na-echeta, “ma o doro anya na ọ ghọtara otú ọnọdụ ahụ dịruru ná njọ n’ihi na ọ nọgidere na-agwa anyị na anyị aghaghị ịtụkwasị Chineke obi.”
Tupu a malite iji ígwè e ji achakpọ anụ ahụ́ gwọwa Maria, dọkịta ya chọpụtara na ọ pụghị ịchịkwa mmegharị nke ụkwụ aka nri ya. Nnyocha ndị ọzọ e mere gosiri na cancer ahụ agbasawo ruo n’ụbụrụ ya. Mgbe a gwọsịrị ya ruo nanị otu izu, a kwụsịrị ịchakpọ anụ ahụ́ ya. Maria tụbọrọ ma nwụọ mgbe ọnwa abụọ gasịrị. “Obi dị m ụtọ na ọ kwụsịwo ịta ahụhụ,” ka Ricardo na-akọwa, “ma ọ na-agụsi m nnọọ ike ịhụ ya anya nke na ọ na-adị m ka ndụ m bịakwuo ná njedebe. Mgbe mgbe, m na-etiku Chineke mkpu, sị: ‘N’ihi gịnị ka i ji kwere ka nke a mee?’”
Mgbe Ọdachi Mere, Ọtụtụ Ajụjụ Na-ebilite
Dị ka Ricardo, imerime mmadụ n’ụwa nile na-ahụjukwa anya n’ihi ọnọdụ ndị ha na-apụghị izere ezere. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ ndị aka ha dị ọcha na-ahụju anya. Cheedị banyere ihe mwute ndị na-agbawa obi agha ndị na-emekpa ihe a kpọrọ mmadụ ahụ́ bụ́ ndị a na-alụ n’esepụghị aka, na-akpata. Ma ọ bụ chee banyere ihe mgbu ọtụtụ ndị e dinara n’ike, ụmụaka ndị a na-emegbu emegbu, ndị a na-eti ihe n’ebe obibi ha, na ndị ụmụ mmadụ na-emeso omume ọjọọ ndị ọzọ, na-enwe. N’akụkọ ihe mere eme nile, o yiri ka mmegbu na ihe mgbu ndị ikom na ndị inyom kpachawooro anya na-akpatara ibe ha enweghị nsọtụ. (Eklisiastis 4:1-3) E wezụga nke ahụ, e nwere oké ihe mgbu nke ndị ọdachi ndị na-emere onwe ha ma ọ bụ ọrịa mmetụta uche, nke uche, na nke anụ ahụ́ metụtara na-enwe. Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ ndị ji ajụ, sị, “N’ihi gịnị ka Chineke ji kwere ka nhụjuanya dị otú ahụ dịrị?”
Ọbụna nye ndị nwere nkwenkwe okpukpe, nhụjuanya adịghị mgbe ọ na-adịrị ha mfe nnagide. Gị onwe gị pụkwara ịdị na-eche ihe pụrụ nnọọ ime ka Chineke na-ahụ n’anya na nke nwere ike nile kwere ka ụmụ mmadụ na-ahụju anya. Inweta azịza na-eju afọ na nke bụ́ eziokwu nye ajụjụ a dị mgbagwoju anya dị oké mkpa maka udo nke uche anyị na mmekọrịta anyị na Chineke. Bible na-enye azịza dị otú ahụ. Biko tụlee ihe o nwere ikwu dị ka a tụlere n’isiokwu na-esonụ.
^ par. 2 A gbanwewo aha ndị ahụ.
Dọkịta ahụ nọgidere na-agwa anyị na anyị aghaghị ịtụkwasị Chineke obi
Nkasi Obi Maka Ndị Na-ahụju Anya
Mụrụnụ Anya Ugbu A Karịa Mgbe Ọ Bụla Ọzọ!
“Nọgidenụ Na-eche Nche”!
Mpempe Akwụkwọ nke Gbanwere Ndụ M
A Kwụghachiri Ya Ụgwọ Maka Nnọgidesi Ike Ya
Gịnị Pụrụ Inyere Anyị Aka Ijizi Okwu nke Eziokwu ahụ Ejizi?
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jenụwarị 1, 2003
Jenụwarị 1, 2003
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jenụwarị 1, 2003